फुटबल फेसबुकको भित्तोमा | Wagle Street Journal
फुटबल फेसबुकको भित्तोमा
हेल्लो शुक्रबार: ठुलो पार्न क्लिके हुन्छ
एक्लै फुटबल हेर्नुको नमज्जा के भने ‘गोओओओओ….ल’ भनेर चिच्याउन नपाइने । सुन्ने कोही नभएपछि त्यसको के अर्थ ? आइभोरी कोस्ट र ब्राजिल भिड्दै थिए । फ्यावियानो र इलानोले तीन गोल ठोकेपछि खेल पूरै एकपक्षीय बनेकाले अरुचि जाग्दै थियो । रोमान्च थप्न अफ्रिकी टोलीले गोल फर्काउनैपर्छ भन्ने चाहना थियो । ड्रोग्बाले पनि एक हानिहाले । अनि ब्राजिलको परम्परागत समर्थक मैले टाइप गरेँ ट्विट्टरमा-GOOOOOOAAAAAAALLLLLLLL!!!!’ (इन्टरनेटमा ठूला रोमन अक्षरले चिच्याएको बुझाउँछ ।) त्यो ‘चिच्याहट’ तत्कालै ट्विट्टर र त्यसमार्फत फेसबुकका भँगालाहरूमा बग्दै सिद्धान्ततः लाखौं मानिसहरूका कम्प्युटर स्क्रृनमा देखापर्‍यो ।
फुटबल इतिहासमा हरेक विश्वकप कोशेढुङ्गा हुन्छ । करोडौं दर्शक उच्चाल्ने प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूले एकअर्कालाई छक्याउँदै गोल गरेको या पेनाल्टी नछिराएको दृश्यबारे मानिसहरूले वर्षौं कुरा गर्छन् । यसपालीको विश्वकपचाहिँ ती सबै कुराबाहेक भुभुजेलाबाट चिनिने हो कि फेसबुक/ट्विट्टरबाट, म निश्चित भइसकेको छैन । भुभुजेला बजाउने दर्शकले पूरै रंगशालालाई एउटा ठूलो घार बनाइदिएका छन्, मानौं ती रिसाएका मौरी हुन् । उनीहरूको त्यो भुनभुनाहटले संसारभरिका थुप्रै दर्शकलाई दिक्क पारेको छ भने कतिपयले ‘त्यो अफ्रिकी फुटबल उत्साहको परम्परा’ भन्दै समर्थन गरेका छन् । रंगशालामा भुभुजेला प्रतिबन्ध गर्न फिफालाई अनुरोध गर्दै प्रतियोगिताको तेस्रो दिन मैले ट्विटेपछि बेलायतको योर्कमा बसेर वातावरण तथा राजनीतिमा पीएचडी भर्खरै सिध्याएका ललितपुरका महेश पौड्याल (twitter.com/mpoudyal)ले ट्विटे- ‘ओहो, मलाई भुभुजेला खुब मनपर्छ । खेल हेर्दा पृष्ठभूमिमा त्यो रमाइलो भुनभुनाहट ।’
कान्तिपुर विचार पृष्ठ: ठुलो पार्न क्लिके हुन्छ
धन्यवाद ट्विट्टर र फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जाल साइट (साससा) हरूलाई जसले संसारलाई खुम्च्याएर यति सानो पारिदिएका छन्, मानौं योर्क, दिल्ली र काठमाडौंका वासिन्दा एउटै कोठामा गफिँदै विश्वकप हेरिरहेका छन् । तिनले एकै समयमा एउटै बल (एडिडास कम्पनीले बनाएको ‘जाबुलानी’), एउटै खेलाडी (मानौं मेस्सी) र एउटै आवाज (भुभुजेला) देखिरहेका/सुनिरहेका हुन्छन् । तिनका प्रतिक्रियाहरू एउटै ठाउँ (ट्विट्टर र फेसबुकका भँगालो) मा आइरहेका हुन्छन् ।
‘नेपालेइडियट’ (twitter.com/nepaleeidiot) उपनामका नेपाली युवक भारतको कुनै सहरमा काम गर्छन्, विश्वकपका हरेकजसो म्याच हेर्छन् र तत्क्षण लागेको कुरा ट्विट्छन् । ‘नेपालबाट टाढा आफ्नो कोठामा एक्लै (फुटबल हेर्दा लागेका कुरा साझेदारी गर्न पाएकोमा) ट्विट्टरलाई धन्यवाद’, उनले एकदिन ट्विटे ।
वेब २.० भनिने अन्तरक्रियात्मक इन्टरनेटको जमानामा भएको यो पहिलो विश्वकप हो । १९९० को दशकको अन्त्यतिर चित्रसहितको इन्टरनेट ब्राउजिङ आए पनि २००० सम्म काठमाडौंमा त्यो केही अफिस या साइबर क्याफेमै सीमित भयो । २००२ को विश्वकपबारे नेपालीहरूले इमेलमा आफ्ना भावना साटे । २००६ मा फेसबुक अमेरिकामै सीमित थियो- कलेजमा । ट्विट्टर सुरु भएकै थिएन । धेरैजसो नेपाली तन्नेरी माइस्पेस र हाइफाइभमा हुन्थ्ये, तर अहिलेजस्तो विश्वव्यापी चाप साससाहरूमा थिएन ।
अहिले सबैजसो साससाले फुटबल केन्दि्रत पृष्ठ बनाएका छन्, प्रशंसकहरूलाई आफूमा बाँधिराख्न । ट्विट्टरको चित्ताकर्षक विश्वकप पेजमा खेल हुँदै गर्दा दर्शकले तत्क्षण गरेका ट्विटहरू त्यहाँ सलल बग्छन् । ट्विटहरूको त्यो बहावमा खेलप्रति संसारको प्रतिक्रिया झल्किन्छ ।
यसै महिनातिर ५० करोडौं प्रयोगकर्ता स्वागत गर्ने भनिएको फेसबुक थुप्रैका लागि इन्टरनेटको पहिलो ढोका या समानर्थी बनेको छ । कुनै जमाना थियो-१० वर्षअघि- हटमेल या याहुमा ठेगाना बनाएपछि इन्टरनेटमा छिरेको मानिन्थ्यो । गएको डेढ वर्षयता फेसबुकमा कोही छैन भने उसले इन्टरनेट चलाएकै छैन भन्ने ठान्न थालिएको छ । फेसबुकको भित्तो अभिव्यक्तिको सबैभन्दा प्रभावशाली स्थान भएको छ, जहाँ सामान्य मानिसहरू ख्यालठट्टा सिर्जना र झगडा गर्छन् ।
प्रमोद न्यौपानेको फेसबुक स्ट्याट्स हेरौं- ‘..हाम्रो दोष हो र ? ब्राजिलले राम्रो खेल्छ, (जन्मेकै फुटबल खेल्न), हामीलाई राम्रो लाग्छ । ..बाबाको काखमा बसेर ब्राजिलले गोल हान्दा गोओओओओओओओल भनेर चिच्याको अहिल्यैजस्तो लाग्छ । हरेकको नसा-नसामा ब्राजिलप्रति मोह देख्छु म ।’
प्रदीप चापागाईंले थपे- ‘हाहाहा दह्रो दियो है ब्रोले…तिम्रै ब्राजिलले जित्छ, नहारेसम्म । अब खुस ?? :)’
ब्राजिली समर्थकहरूको गफबाट जितेन्द्र कार्कीलाई खुब रिस उठेछ । उनले ठोके- ‘हो-हो, ब्राजिलियनहरूमात्र फुटबल खेल्छन्, अरू सबै.. लाटाले पापा हेरेजस्तै हेर्छन् । ..वल्र्डकपमा सहभागी टिम सबै ब्राजिलकै होलान्, हैन ब्रो ।’
जनक राजालाई झन् रिस उठ्यो, जितेन्द्रसँग- ‘तिमीलाई समर्थन गर्नु छैन भने बीचमा छिरेर बाठो हुने जरुरत छैन । आफ्नो काम गर न ।’
जितेन्द्रको पारो चढ्यो- ‘फेसबुक तिम्रा बाको हो, तिमीसँग अनुमति लिनुपर्ने ?’
आफ्नो वालमा साथीहरूको झगडा परेपछि प्रमोदले हस्तक्षेप गर्नैपर्‍यो । उनी लेख्छन्- ‘जितेन्द्र गुरु, साह्रै निक्रिष्ट कुरा भो । माइक्रोसफ्टले अमेरिकामा विन्डोज बनाको…अमेरिकीले मात्रै चलाउँछन् ? तर…विन्डोज…अरूले (बनाउन) सक्छन् ?… ब्राजिल ट्रेडमार्क हो…फुटबलको..अरूले झुक्केर वल्र्डकप जित्छन्…ब्राजिलले झुक्केर हार्छ ।)’
यी व्यक्तिहरू मेरा ‘फेसबुक साथी’ (‘साथी’ र ‘फेसबुक साथी’मा फरक छ है साथी हो) होइनन् । प्रमोदको वाल मेरोजस्तै सबैले हेर्न मिल्नेगरी सार्वजनिक छ । उनले र मैले फेसबुक खाताको गोपनीयताको सेटिङ त्यस्तै राखेका छौं । अहिले गोपनीयतालाई लिएर फेसबुकको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । दायाँपट्टी माथिल्लो कुनामा ‘एकाउन्ट’ अन्तर्गत ‘प्राइभेसी’मा चाहे अनुसारको ‘ताल्चा’ लाउन मिल्छ । सबैलाई ‘फेसबुक साथी’ बनाउनैपर्छ भन्ने छैन । बनाए पनि सबैलाई वाल या एल्बममा पहुँच दिनैपर्छ भन्ने छैन । नचिनेकोले ‘एड’ गरे नकार्न सकिन्छ । स्वीकारे पनि उसलाई वाल/फोटोमा लेख्न दिने/नदिने ठ्याक्कै छुट्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि साथीहरूको सूची बनाउनपर्छ । जस्तो- खास, अफिसका, हेल्लो-हाई, नदेखेका, परिवार आदि । तपाईंको वालमा लेखिने कुराको जिम्मेवार तपाईं नै हो ।
बितेको एक वर्षमा फेसबुकमा नेपालीहरूको बाढी लागेको छ । प्रविधिबारे अलि जानकार कतिपय तन्नेरीहरू ‘ह्या, फेसबुक पुरानो’ भन्दै ट्विट्टरप्रति आकर्षित भएका छन् । त्यो विश्वव्यापी लहर हो, प्रविधिमा सहजै भिज्नेहरूले ट्विट्टर मनपराएका छन् । बुझेपछि ट्विट्टरमा नशै बस्छ, फेसबुकको भन्दा बढी । तर दुवै साइटका विशेषता र कमजोरी छन् ।
बढी पारदर्शी र व्यापक मानिससँग सहजै पहुँच हुन्छ, ट्विट्टरमार्फत । अरुन्धती रोयसँग कुरा गर्न मन लाग्यो ? ट्विटरमा सजिलो छ । खाता खोल्नुस्, बाकसमा @arundhati_roy लेखेर सन्देश टाइप गर्नुस्, उनले देख्छिन् । ट्विटको गहनाता हेरी प्रायः ख्यातिप्राप्तले जवाफ दिन्छन् । फेसबुकमा एड भनेजस्तो ट्विटरमा फलो (पछ्याउनु) भनिन्छ । ट्विटरमा कसैसँग कुरा गर्न उसलाई पछ्याउनै पर्दैन । पछ्याउँदा उसका ट्विट्सहरू स्वतः आफ्नो भँगालोमा ‘टाइमलाइन’मा आउँछन्, जसलाई फेसबुकमा ‘न्युज फिड’ भनिन्छ । या भँगालो । ट्विट्टर एउटा मञ्च हो, जहाँ गएर ‘खै के लेख्ने’ या ‘भात खाएँ’ लेखेर हुँदैन । मञ्चको वक्ताले उपयोगी कुरा गरे मान्छे सुनेर बस्दैनन् ? ट्विट्टरमा पनि उपयोगी सूचना, जानकारी र कुनै पनि घटनाबारे तपाईंले मात्रै दिनसक्ने विचार/विवरण ट्विटे मान्छेहरूले पछ्याइहाल्छन् ।
यो लेखको एउटा स्वरुप पहिलो पटक हिजोको कान्तिपुरको ‘हेल्लो शुक्रबार’ मा प्रकाशित भएको हो भने अर्को स्वरुप आजको कान्तिपुर विचार पृष्ठमा प्रकाशित भएको हो । कान्तिपुर छापिने कागज निर्यातमा आएको समश्याका कारण हिजोको हेल्लो इन्टरनेट (इकान्तिपुर) मै मात्र प्रकाशित भएको थियो, मुद्रणमा आएको थिएन ।
सम्बन्धित लेख (अङ्ग्रेजीमा)
१. The Twitter World Cup #Football
This entry was posted in नेपाली समाज, प्रबिधी, हेल्लो शुक्रबार and tagged इन्टरनेट, ट्वीट्टर, फुटबल, फेसबुक, विश्वकप, facebook, football, internet, twitter, world cup on June 26, 2010 by Dinesh Wagle.
← The Twitter World Cup #Football Meghalaya, India: Marriage is NotaPrivate Affair →
3 thoughts on “फुटबल फेसबुकको भित्तोमा”
Deepti June 26, 2010 at 10:44 am
dherai ramro chha dai… I read it aloud with my friends here and was fun…
nirjala pandey June 23, 2011 at 8:29 pm
26 jun 2010 ko news dhilai vaye pani padhe dharai dharai ramro6dai ………….
Pingback: गुगल @ १३ | ब्लगमान्डू